IMF oo shaacisay in dalalka khaliijka ay ku faqrin doonaan 15 sano, hal sabab darteed | Xaysimo
Home War IMF oo shaacisay in dalalka khaliijka ay ku faqrin doonaan 15 sano,...
Hay’adda lacagta adduunka ee IMF ayaa Khamiistii sheegtay in ay baabi’in doonto hodantinimada dalalka Khaliijka ee ku dhisan saliidda, 15-ka sano ee soo socda, haddii aysan sameyn is-beddelo misaaniyadeed.
Lixda dal ee la iskiu yiraah Golaha Iskaashiga Khaliijka, ee kala ah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, iyo Imaaraadka Carabta, oo hodantinimadooda ay gaareyso laba trillion oo dollar, ayaa soo saara 20% shidaalka laga isticmaalo caalamka. Hase yeeshee waxaa dhaawacaya hoos u dhaca qiimaha shidaalka dunida.
IMF ayaa sheegtay in dalabka dunida ee shidaalka uu dhammaan doono sanadda 2040 ama ka hor, haddii ay sii socdaan dadaallada lagu bad-baadinayo deegaanka iyo isticmaalka tamarta aan ku dhisneyn shidaalka.
“Dhammaan dalalka Khaliijka waxay garowsan yihiin caqabadaha ay wajahayaan, hase yeeshee xawaaraha ay ku sameynayaan is-beddelo ma xasilin doonto dakhligooda,” ayay tiri IMF.
Dalalka Khaliijka ayaa sanado badan waxay hodantinimadooda tamarta u adeegsanayeen inay mallaayiin ka mid ah muwaadiniintooda siiyaan shaqooyin dowladeed, iyo adeegyo bilaash ah.
Hase yeeshee, shaqooyin dowladeed oo lacag badan lagu bixiyo, ayada oo shaqaalaha aysan wax soo saar wanaagsaneyn, iyo shacabka oo sii kordhaya, ayaa sare u qaadi doonta qiimaha ku baxaya.
Dalalka Khaliijka ayaa dhowaanahan billaabay inay canshuur saaraan adeegyada iyo iibka walxaha qaarkood, si ay dakhli cusub usoo kordhiyaan, hase yeeshee taasi wax weyn kama tarin in miisaaniyadad dowladda ay hesho ilo-dhaqaale oo kala duwan.
IMF ayaa tusaale usoo qaadatay dalka Kuwait oo ay sheegtay in lixda sano ee soo socota ay miisaaniyadda dowladda ka dhinaan doonto 180 bilyan oo dollar, sababo la xiriira dakhliga kasoo galo shidaalka oo sii yaraanaya.
Sidoo kale miisaaniyadda dowladda Sacuudiga ayaa waxaa sanadkan ka dhinnaa 50 bilyan oo dollar, taasi oo ka badan tii sanadkii 2019 oo ahayd 35 bilyan.
IMF, waxay sheegtay in qiimaha shidaalka oo hoos usii dhacaya darteed, uu sii kordhi doono gaabka miisaaniyadda dalalka khaliijka.